Home / nyiwe / Tablet / MT4 maka gam akporo
MT4 Mobile trading platform bụ gị ọnụ ụzọ na ahịa ego, ọbụna mgbe ị na-aga, na-enye gị nchịkọta nke niile atụmatụ ahịa ị na-enwe na-eji MetaTrader 4 desktọọpụ ikpo okwu.
Ngwakọta dị iche iche nke ngwá ọrụ nhazi ugbu a na-akwado ọrụ ịzụ ahịa gị - 30 nke ihe ntanetị ọkacha mmasị gị, oge dịgasị iche iche na oge ahịa ahịa. Ugbu a, ọ dị mfe ịnweta atụmatụ azụmahịa gị site na iPhone / iPad / iPod Touch ma ọ bụ gam akporo.
Ịnweta ohere akaụntụ FXCC na trading gị na 3 nzọụkwụ dị mfe - nbudata, wụnye ma banye na ikpo okwu mobile na-eji njikwa akaụntụ FXCC gị.
Na MT4 mobile ị nwere ike:
Jikọọ na akaụntụ ahịa gị site na ebe ọ bụla;
Jikwaa njedebe ịbata ahịa na ịpụpụ ahịa gị site n'itinye, ịmegharị ma ọ bụ mmechi ahịa;
Tinye ihe ngosi 30;
Gbanye ego na-eji usoro nhazi ala.